Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika » Ujongo lweNethiwekhi yoKhenketho lweHlabathi kuKhenketho kunye nobuNqolobi
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • LGBTQ • iindaba • abantu • Cinezela iZaziso • Safety • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo • I-WTN
Isiphithiphithi sanamhlanje kunye nohlaselo lokoyika e
Isikhululo senqwelomoya saseHamid Karzai eKabul, eAfghanistan kunye neBaron Hotel ekufutshane sisitshintshi somdlalo kwishishini lezoKhenketho noKhenketho lwehlabathi esele liethe-ethe.
Umongameli weNethiwekhi yezoKhenketho yeHlabathi uGqirha Peter Tarlow ukhupha ingxelo nezimvo zakhe.
Uhlaselo lwanamhlanje eKabul, eAfghanistan kukwaluhlaselo loKhenketho lweHlabathi.
Nge-26 ka-Agastith Ukuhlaselwa kwabantu baseKabul kwisikhululo senqwelomoya abazama ukumka eAfghanistan kusebenza njengesikhumbuzi malunga nokuba iyingozi kangakanani imeko eAfghanistan.
Ngomhla wokugqibela wokuhamba kwe-US kunye namahlakani ayo kwelo lizwe kusondela ngokukhawuleza kubalulekile ukuba iingcali zeshishini lokhenketho zithathe umoya kwaye ziqwalasele iimpembelelo ezinokubakho zoloyiso lweTaliban kwilizwe lezokhenketho.
The Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi Uziva ngathi kubalulekile ukuba eli candelo lehlabathi lingazikhuselanga kuphuhliso lwangoku lwe-COVID, ukutshintsha kwemozulu kunye nezoyikiso.
UMongameli we-WTN UGqr Peter Tarlow okwangumchwephesha owaziwayo wokhuselo nokhuseleko kushishino lokhenketho nokhenketho ubhala athi:
Ukhenketho aluhlukanga kwiingxaki ezikhoyo kwihlabathi liphela
Nangona kuyakubakho amanqaku amaninzi ngokubhekisele ekuthathweni kweTaliban iAfghanistan ebhalwe ngokwembono yezopolitiko kuhlala kungenzeki ukwahlula ilizwe lezenzo zopolitiko kwilizwe lokhenketho. Umzekelo, uhlaselo lwe-Al Qaeda ngo-Septemba ka-2001 yayizizenzo zopolitiko, kodwa iziphumo yaba luqoqosho olukhawulezileyo kwezokhenketho kwaye ishishini lokhenketho lisaziva kwiminyaka emashumi mabini kamva ukuphindwaphindwa kukaSeptemba 11, 2001. USeptemba 2021 akazukuphawula nje iminyaka engamashumi amabini uhlaselo olukwabizwa ngokuba yi-9-11 (Septemba 11th) kodwa ukuphuma kwexesha elinokubakho elitsha nelinobungozi kwilizwe lokhenketho.
Akukho mntu waziyo ukuba ilizwe lokhenketho liza kujongeka njani kwinyanga ezi-6, unyaka, okanye iminyaka emibini ukusukela ngoku. Icandelo lezokhenketho lihlala lisemngciphekweni wezehlo zezopolitiko okanye ezoqoqosho ezingalindelekanga nezihlala zibizwa ngokuba yimisitho ye "black swan".
Njengonxibelelwano oluphambili lwenza ukuba kubonakale ngathi ilizwe liyakhula lincinci, kwaye iziganeko zaziwa kwihlabathi liphela phantse ngephanyazo kubonakala ukuba kukho inani lemisitho ye-swan emnyama inyuka ngexesha.
Ezi ziganeko zihlala zinempembelelo kwizigqibo zethu zokuhamba, kokubini ukonwaba kunye neshishini. Amagosa ezokhenketho kufuneka asoloko ekhumbula ukuba imisinga yezembali ayizizo ziganeko zodwa, kodwa yingqokelela yeziganeko. Okumangalisayo kukuba le mixube ibonakala ingenakulindeleka ngaphambi kokuba yenzeke kodwa xa sele yenzekile ibonakala ngathi iyinto ebisoloko isenzeka.
Iziganeko zehlobo lasehlotyeni lowama-2021 ziyibonisa le minyhadala yeziganeko nakukhenketho, imbono yoshishino ifuna uhlalutyo olunengcinga. Nangona ndibhala eli nqaku ngokwembono yase-United States, ngokwenyani, uninzi lwezi zimbali ziyimbali ziya kuba nefuthe kushishino lokhenketho lwehlabathi.
Ihlobo lowama-2021 laligcwele imingeni emitsha nengasonjululwanga. Umzekelo, ishishini lezokhenketho lalinethemba lokuba ekupheleni kwehlobo elisemantla e-hemisphere ukuba ubhubhane we-COVID-19 uya kuba yinxalenye yembali kunokuba ube ngumceli mngeni oqhubekayo.
Ukwahluka kwe-Delta yesibetho se-COVID kuligqibile elo themba.
Nge-Agasti ka-2021 ubuninzi behlabathi bunamathele kwimicimbi enjengokugonya okanye ukungagonyo kwaye ukuba ukudubula kwesithathu kuyafuneka. Kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo, akukho mntu, okanye bambalwa kakhulu abantu, ababekhe beva ngohlobo olwahlukileyo lwe-COVID ye-Delta.
Amaziko okhenketho, afana neHawaii, ayekhula, kwaye kwakukho ithemba lokuba ishishini lokuhamba ngenqanawa kungekudala liza kuba sezinyaweni.
Endaweni yoko, safunda imixholo ephambili efana nale: "URhulumente waseHawaii akakhuthazi ukuhamba ukuya kwilizwe phakathi kwe-Uptick kumatyala e-COVID-19" (Imagazini ye-Travel & Leisure), okanye Ukubhukisha uhambo lwaseHawaii ngoku sisigqibo sobomi nokufa. (eTurboNews)
Olu konyuka kwamatyala e-covid lwenzeka ngexesha elinye apho i-US (kunye nehlabathi elininzi) lijamelana neyona meko imbi yokunyuka kwamaxabiso kumashumi eminyaka.
Izihloko ezinjengezi zilandelayo ezivela kwi-CNBC (Julayi 2021) "Ukunyuka kwamaxabiso kunyuka ngaphezulu kunokuba bekulindelwe ngoJuni njengoko isalathiso sexabiso sinyuka nge-5.4%" sichaza ukuba ngubani na umntu osele ethenga sele esazi. Kubaluleke ngokukodwa ukuba amagosa ezokhenketho aqonde ifuthe lokunyuka kwamaxabiso njengoko abantu abasempilweni abadla umhlala-phantsi besenza icandelo elikhulu lezokhenketho. Eli candelo loluntu oluhambahambayo lihlala liphila kwimali engenayo kwaye libaluleke kakhulu kumaxabiso anyukayo.
Ingxaki eyongezelelweyo yokuchaphazela ishishini lokhenketho lulwaphulo-mthetho
Umzekelo kwinqaku leendaba le-BBC ngoJulayi 7th ngolwaphulo-mthetho eMelika uthi: “The New York Times yajonga kwizixeko ezingama-37 phesheya kwe-US ngedatha yeenyanga ezintathu zokuqala zalo nyaka (2021), kwaye ngokubanzi kuye kwakho ukwanda kwe-18% ekubulaweni xa kuthelekiswa nexesha elifanayo ngo-2020. ”
Imixholo enjalo kwihlabathi liphela ayikukhuthazi ukuya eUnited States nje ukuba imida yayo ivulwe kwakhona. Ulwaphulo-mthetho luye lwanefuthe kuhambo lwasekhaya ukuya kwizixeko zase-US ezinje ngeChicago, Portland, Oregon, Miami, Houston, San Francisco, Seattle, Washington, DC, naseNew York City.
The uhlaselo kwisikhululo senqwelomoya saseKabul namhlanje kugxininisa into yokuba ukhenketho ngoku lujamelene nezoyikiso ezintsha.
Okwangoku, akukho mntu wazi kakuhle ukuba ukuthatha kukaTaliban iAfghanistan kuya kubulala abantu kwezokhenketho lwehlabathi.
Into esiyaziyo kukuba i-Afghanistan ngoku iphantsi kolawulo olupheleleyo lweqela labanqolobi. Ulawulo lweTaliban e-Afghanistan kwiminyaka engamashumi amabini eyadlulayo lubangele indawo ekhuselekileyo yabanqolobi be-Al-Qaida kunye nohlaselo oluninzi ngokuchasene neenjongo ezinkulu zopolitiko nezokhenketho ezinjengeZiko lezoRhwebo leNew York.
Inyani yokuba iAfghanistan ngoku ilawulwa liqela lamaSilamsi elisisiseko lenza imeko yahluke ngokupheleleyo kwezinye iingxaki ezikhoyo, ngakumbi njengoko ukhenketho ngaphambili lwalusebenza njengomazibuthe wohlaselo lobunqolobi. Ubungakanani babanqolobi abenza ingozi enkulu kumzi-mveliso wokhenketho ngoku mkhulu kunaliphi na ixesha ukusukela oko kwahlaselwa ngo-9-11.
Isishwankathelo esikhawulezayo seminye yemiceli mngeni ekuweni kwe-Afghanistan kuthetha ukhenketho lwehlabathi:
Ukuhamba kunokuba nzima kakhulu kwaye kuyingozi. Inyaniso yokuba ngoku kukho amawaka abantu abangazukuphononongwa abashiye i-Afghanistan kuthetha ukuba kukho ithuba lokuba ubuncinci baba bantu banokuba yinxalenye yeeseli zokulala kwaye oorhulumente kuya kufuneka bathathe amanyathelo okhuseleko de kucace ukuba ngubani Ukuhamba nokuba yeyiphi imeko.
Umda wase-US-Mexico, osele uyingozi, uya kuba yingozi kakhulu. I-United States kwezi nyanga zisixhenxe zidlulileyo ibinomgaqo "ovulekileyo". Abafuduki abangahloliswanga kakuhle okanye abangenasiphazamiso ngoku bangena eUnited States bevela kwizizwe ezinobuhlobo nezingenabuhlobo. Abanye baba bantu beza ngezizathu zokhuseleko lwezopolitiko okanye ithuba loqoqosho. Abanye banokuba beza ngezizathu ezingavakaliyo kwaye kanye e-US banenkululeko yokuya naphi na apho bathanda khona. Oku kungayeki okungagunyaziswanga sele kukhokelele kulwaphulo-mthetho kunye nezifo kubandakanya iCovid.
IYurophu kufuneka ilindele ukwanda kweembacu ezingafakwanga eziza kuqhubeka nokwenza iYurophu ingakhuseleki kangako kwaye ingathandeki kangako kwiindwendwe. Iziphumo ziya kuba kukuhla kwemigangatho yokuphila yaseYurophu kunye nomgangatho wobomi.
Imvelaphi yemveli yeTaliban, iziyobisi ezingekho mthethweni ngakumbi imveliso yeqhawekazi, iya kunyuka kwaye oku kunyuka kuya kubangela iingxaki kushishino lokhenketho. "Abalimi beNarcotic" abasayi kuphinda boyike enye into ngaphandle komqokeleli werhafu kwaye isiphumo sinokuba sisonyuka esikhulu sokurhweba ngeziyobisi (kwaye mhlawumbi nokwabelana ngesondo) kwihlabathi liphela, ngakumbi kumazwe asentshona. Zezizwe ezivelisa uninzi lokhenketho lwehlabathi.
Ukukhutshwa ngesiquphe kwe-United States e-Afghanistan kunye nokusilela kwayo kokudibana ne-NATO kungabangela ukuba umfelandawonye we-NATO ube buthathaka kanye ngexesha apho ukhenketho luza kujongana nezisongelo zobunqolobi. Icandelo lezokhenketho liza kudinga ukusebenzisana kunye nee-arhente zikarhulumente ezininzi ngokuchasene nazo naziphi na izoyikiso zobunqolobi okanye ulwaphulo-mthetho olulungelelanisiweyo.
Inyani yokuba okwangoku amaTshayina abona iMelika ebuthathaka inokukhuthaza uhlaselo eTaiwan okanye kwezinye iindawo zoLwandle lwase China lwase China. Amanqanaba angazinzanga anokwenzakalisa ukubuyela kwezokhenketho kumda weAsia Pacific kunye nakumazantsi e-Asiya amazwe kwezoKhenketho kulo mmandla zinokulawulwa ngokupheleleyo ngamaTshayina kwaye amazwe afana neNyakatho Korea anokuba nesibindi sokuziphatha ngokungakhathali. Kufuneka kukhunjulwe ukuba uninzi lweemithwalo zehlabathi zihamba ngenqanawa kwaye uhlaselo lweendlela ezinkulu zolwandle zinokubangela ukunyuka kwamaxabiso ezothutho.
Ukuwa kweKabul kukuvusa umnxeba kubaphathi bezokhenketho. Eli ayiloxesha lokunciphisa ukhuseleko lokhenketho kodwa endaweni yoko cwangcisa ixesha elinokubanzima.
Iinkokheli zezoKhenketho ziya kudinga ukusebenzisana noorhulumente babo, ii-arhente zogcino-mthetho, kunye nabaphathiswa babo bezempilo ukwenza iimeko zokwandisa ushishino lokhenketho kunye nokhuseleko olukhulu nokhuseleko.
La ayizukuba ngamaxesha alula, kodwa ishishini lezokhenketho eliza kuphila kufuneka lijongane nezinto eziyinyani, kufuneka lilungiselele izinto ezimbi kakhulu, kodwa kwangaxeshanye thandazela okona kulungileyo kwaye usebenzele ukudibanisa abantu.
Malunga neNethiwekhi yezoKhenketho yeHlabathi (WTN)
I-WTN lilizwi ekudala liphelelwe lixesha lokuhamba kwamashishini amancinci naphakathi kunye namashishini ezokhenketho kwihlabathi liphela. Ngokumanyanisa iinzame zethu, sizisa phambili iimfuno kunye neminqweno yamashishini amancinci naphakathi nabachaphazelekayo.
Ngokudibanisa amalungu abucala nawoluntu kwicandelo lommandla nakwihlabathi, i-WTN ayisixhasi kuphela amalungu ayo kodwa ibabonelela ngelizwi kwiintlanganiso ezinkulu zokhenketho. I-WTN ibonelela ngamathuba kunye nothungelwano olubalulekileyo lwamalungu ayo kumazwe ali-128 okwangoku.
Olunye ulwazi malunga nobulungu kunye nemisebenzi yiya www.wtn.travel